Hisy ny sidina manokana: hampodiana ireo teratany malagasy sahirana taraiky any ivelany | NewsMada
Hisy ny sidina manokana: hampodiana ireo teratany malagasy sahirana taraiky any ivelany
Par Taratra sur 08/06/2020
Nanapa-kevitra ny fanjakana malagasy fa hampody ireo teratany malagasy ianjadian’ny fahasahiranana any amin’ireo firenen-kafa ao anatin’izao fotoan-tsarotra lalovan’ny firenen-drehetra maneran-tany izao.
Hametraka haingana, araka izay azo atao, ny rafitra sy ny rindran-damina ahafahana mitatitra ireo teratany malagasy ireo, araka izany, ny tompon’andraikitra rehetra, araka ny tatitry ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny.
Miaina zava-tsarotra ireo Malagasy tavela any ivelany ireo. Voaroaka tamin’ny asany, tsy manana trano fonenana, mipetraka amin’ny akany, tsy manan-kohanina ary lasa vesatra maharitra ho an’ireo masoivoho sasany mihitsy aza.
Handraisana fepetra hentitra ny fampodiana azy ireo raha ny tatitra hatrany. Ao anaty filaminana sy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka ny handraisana azy ireo eto an-tanindrazana. Mihiboka mandritra ny fotoana maharitra ahafahana manara-maso ny fahasalamany hifehezana ny aretina Covid-19.
Tandrovina fatratra ary atao laharam-pahamehana ny fahasalaman’ny olom-pirenena rehetra mipetraka eto Madagasikara ka tsy ireo avy any ivelany indray no hamoa-doza toy ny nidiran’ny aretrina eto tany am-piandohana.
Anarivony mahery ireo teratany malagasy miaina ao anatin’ny fotoan-tsarotra ary mahatsiaro ho tapi-dalan-kaleha mihitsy aza, voasoratra anarana ao amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny eto an-toerana.
Nanamarika ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny fa tsy midika velively ho fisokafan’ny sidina ana habakabaka akory ny fampodiana manokana ireo teratany malagasy eto an-tanindrazana. Mbola manan-kery avokoa ireo fepetra napetraka mikasika ny fikatonan’ny habakabak’i Madagasikara.